ဖြစ်ချိန်တန် ဖြစ် ပျက်ချိန်တန် ပျက်တာ လောက ဓမ္မတာပါ... - Barnyar Barnyar
May 16, 2022 linn htet KNOWLEDGE 0
15-5-2019 တုန်းက မိုးကြိုးစက်ကွင်းမိလို့ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော် ကျောက်လုံးတော်ကြီး အပြင်ကျောက်လွှာ အနည်းငယ်ကွာကျတယ်။ 16-5-2022မှာ မိုးကြိုးစက်ကွင်း မလွတ်လို့ အပြင်ကျောက်လွှာ အနည်းငယ် ကွာကျတယ်။
ဒါတွေဟာ သဘာဝဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ရတယ်။ ဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ ဘယ်ဟာမဆို ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောဘဲ။ ဒါကို နားလည်ရင် ဟိုနိမိတ် ဒီနိမိတ်တွေ ပြောစရာမလိုဘူး။အညာမှာ မိုးကြီးလို့ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းမှာ တည်ထားတဲ့ စေတီပြိုတယ်။
စစ်ကိုင်းဘက်မှာ ငလျှင်လှုပ်လို့ ထီးတော်တွေ မြေခတယ်။ပုဂံမှာ ငလျှင်လှုပ်လို့ စေတီတွေပျက်စီးတယ်… သဘာဝဘေးဒဏ်ရယ် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာတော့ အုတ်အဆက်ဆွဲအားတွေ ကျလာတာရယ်ကြောင့် ပျက်စီးပြိုကျတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘဲ လေ့လာကြည့်ပါ။
အသက်ကြီးလာပြီဆိုရင် ငယ်ရွယ်စဉ်ကလို အစားအသောက်တွေ မစားနိုင်တော့ဘူး။ လှုပ်ရှားတာတွေ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး….. စသည်ဖြင့်ပေါ့, ယိုယွင်းလာတယ်။ ခုလဲ ဒီလိုဘဲ နှစ်တွေကြာလာတော့ ယိုယွင်းလာပြီး မိုးကြိုး
ဒါကို မကောင်းတဲ့နိမိတ်တွေကောက်ပြီး ပြောဆိုနေကြတာဟာ အသိဉာဏ်မဲ့လွန်းတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ ဘယ်အရာမဆို ပျက်ချိန်တန်ရင် ပျက်တာဘဲ။ ဘယ်လောက်တန်ခိုးကြီးကြီး ဘွဲ့တွေဘယ်လောက်ရရ, အာဏာတွေ ဘယ်လောက်ရှိရှိ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပျက်စီးမယ်,သေကြမယ်။
ဒီအတိုင်းသွားကြမှာဘဲ။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီမှာ မိုးကြိုးစက်ကွင်းကြောင့် အပြင်ကျောက်လွှာကွာတာဟာ ကျောက်လုံးတော်ကြီးကို မထိခိုက်ဘူး။ ကွာချိန်တန်လို့ကွာတာ။
မိုးကြိုးစက်ကွင်းလွတ်လဲ နောက်ကွာမှာဘဲ။ အရင်ကလဲ သူ့အလိုလိုကွာတာဘဲ။ လေ့လာကြည့်ပါ။ တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလဲ သဘာဝဘေးဒဏ်ရှိတာပါဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံတခုထဲ ကွက်ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက သဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်တာကို မကောင်းတဲ့နိမိတ်တွေ ပြောဆိုနေမဲ့အစား ကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ပါ။ မနာလိုစိတ် မထားပါနဲ့။ သူများကို ကူညီပါ။ အရာရာ အကောင်းမြင်စိတ် မွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
credit : https://www. facebook. com/ profile.php?id=100010338698387 မှဂရုတွင်တင်ထားသောပို့စ်အား ကူးယူဖော်ပြသည်။
ဖွဈခြိနျတနျ ဖွဈ ပကျြခြိနျတနျ ပကျြတာ လောက ဓမ်မတာပါ…
15-5-2019 တုနျးက မိုးကွိုးစကျကှငျးမိလို့ ကြိုကျထီးရိုးစတေီတျော ကြောကျလုံးတျောကွီး အပွငျကြောကျလှာ အနညျးငယျကှာကတြယျ။ 16-5-2022မှာ မိုးကွိုးစကျကှငျး မလှတျလို့ အပွငျကြောကျလှာ အနညျးငယျ ကှာကတြယျ။
ဒါတှဟော သဘာဝဒဏျကွောငျ့ ဖွဈရတယျ။ ဘုရားဟောထားတာရှိတယျ။ ဘယျဟာမဆို ဖွဈပွီးရငျ ပကျြမယျဆိုတဲ့ သဘောဘဲ။ ဒါကို နားလညျရငျ ဟိုနိမိတျ ဒီနိမိတျတှေ ပွောစရာမလိုဘူး။အညာမှာ မိုးကွီးလို့ ဧရာဝတီမွဈကမျးမှာ တညျထားတဲ့ စတေီပွိုတယျ။
စဈကိုငျးဘကျမှာ ငလြှငျလှုပျလို့ ထီးတျောတှေ မွခေတယျ။ပုဂံမှာ ငလြှငျလှုပျလို့ စတေီတှပေကျြစီးတယျ… သဘာဝဘေးဒဏျရယျ နှဈပေါငျးထောငျခြီကွာတော့ အုတျအဆကျဆှဲအားတှေ ကလြာတာရယျကွောငျ့ ပကျြစီးပွိုကတြယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုဘဲ လလေ့ာကွညျ့ပါ။
အသကျကွီးလာပွီဆိုရငျ ငယျရှယျစဉျကလို အစားအသောကျတှေ မစားနိုငျတော့ဘူး။ လှုပျရှားတာတှေ မလုပျနိုငျတော့ဘူး….. စသညျဖွငျ့ပေါ့, ယိုယှငျးလာတယျ။ ခုလဲ ဒီလိုဘဲ နှဈတှကွောလာတော့ ယိုယှငျးလာပွီး မိုးကွိုး
ဒါကို မကောငျးတဲ့နိမိတျတှကေောကျပွီး ပွောဆိုနကွေတာဟာ အသိဉာဏျမဲ့လှနျးတယျလို့ ပွောခငျြတယျ။ ဘယျအရာမဆို ပကျြခြိနျတနျရငျ ပကျြတာဘဲ။ ဘယျလောကျတနျခိုးကွီးကွီး ဘှဲ့တှဘေယျလောကျရရ, အာဏာတှေ ဘယျလောကျရှိရှိ တဈခြိနျခြိနျမှာ ပကျြစီးမယျ,သကွေမယျ။
ဒီအတိုငျးသှားကွမှာဘဲ။ ကြိုကျထီးရိုးစတေီမှာ မိုးကွိုးစကျကှငျးကွောငျ့ အပွငျကြောကျလှာကှာတာဟာ ကြောကျလုံးတျောကွီးကို မထိခိုကျဘူး။ ကှာခြိနျတနျလို့ကှာတာ။
မိုးကွိုးစကျကှငျးလှတျလဲ နောကျကှာမှာဘဲ။ အရငျကလဲ သူ့အလိုလိုကှာတာဘဲ။ လလေ့ာကွညျ့ပါ။ တခွားတိုငျးပွညျတှမှောလဲ သဘာဝဘေးဒဏျရှိတာပါဘဲ။ မွနျမာနိုငျငံတခုထဲ ကှကျဖွဈတာ မဟုတျဘူး။
နောကျဆုံးပွောခငျြတာက သဘာဝဘေးကွောငျ့ဖွဈတာကို မကောငျးတဲ့နိမိတျတှေ ပွောဆိုနမေဲ့အစား ကုသိုလျအလုပျတှလေုပျပါ။ မနာလိုစိတျ မထားပါနဲ့။ သူမြားကို ကူညီပါ။ အရာရာ အကောငျးမွငျစိတျ မှေးနိုငျအောငျကွိုးစားပါ။
credit : https://www. facebook. com/ profile.php?id=100010338698387 မှဂရုတှငျတငျထားသောပို့ဈအား ကူးယူဖျောပွသညျ။
မိုးဦးကာလမှာ အဖြစ်များတဲ့ မိုးကြိုးပစ်ခံရခြင်းအန္တရာယ်က ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ-